सेक्सपछि के सोच्छन् पुरुष? – Health Post Nepal
सेक्सपछि के सोच्छन् पुरुष?
२०७७ माघ २६ गते १८:०९
पुरुष सेक्सको मामलामा महिलाभन्दा बढी बिन्दास हुन्छन्। महिला सेक्सका बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न्। सेक्सभन्दा पहिले वा पछि पुरुषको शरीरमा थुप्रै परीवर्तन आवन सक्छ।
सेक्स गरिसकेपछि पुरुषहरू बढी आनन्द महशुस गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरूको भावनामा परीवर्तन आउन पुग्छ। र, उनीहरूले अनौठो व्यवहार गर्नथाल्छन्।
कतिपय महिलालाई पुरुषको त्यस्तो व्यवहार मन गर्दैन। तर, केही पुरुष आफ्नो पार्टनरलाई दुखी नतुल्याउनका लागि आफूमा आएको परिवर्तित व्यवहार देखाउन चाहदैनन्।
शारीरिक सम्बन्धका क्रममा महिलाभन्दा पुरुष बढी थाक्ने गर्छन्। त्यसैले पुरुष सेक्स गरिसकेपछि आनन्दको निन्द्रा लिन चाहन्छन्। केही महिलामा पनि यस्तो बानी हुन्छ। तर, अधिकांश महिलाई पुरुषको यो बानी मन पर्दैन। उनीहरू सेक्स गरिसकेपछि प्रेमिल कुरा गर्न चाहन्छन्।
सेक्स गर्दा पुरुषको शरीरबाट निस्किने बिर्यसँगै थुप्रै केमिकल पनि बाहिर आउँछन्। जसले पुरुष बढी नाक्न पुग्छन्। र, सुत्न रुचाउँछन्।
यसका साथै पुरुषमा सेक्सको दौरान स्पर्म रिलिज हुन्छन्। जसले शरीरमा प्रोटिन हार्मोन रिलिज हुन्छ। जसले निन्द्रा लाग्छ। सेक्स गर्दा पुरुषको शरीरमा लव हार्मोन अर्थात अक्सिटोनिस रिलिज हुन्छ। जसले गर्दा पनि पुरुषमा सेक्सपछि निन्द्रा लाग्छ।
एक अध्ययनका अनुसार सेक्सपछि पुरुष हैरान हुन पुग्छन्। यो सबै पुरुपमा लागु नहुन सक्छ। तर, अध्ययनका अनुसार ४१ प्रतिशत मानिस शारीरिक सम्बन्धपछि दुखी हुनपुग्छन्। जुन सामान्य लक्षण हो।
धेरै जस्तो यो महिलामा हुन्छ। तर, केही पुरुषमा पनि लागुहुनसक्छ। धेरै पुरुष सेक्सभन्दा पहिले उत्साहित हुन्छन्। सेक्सपछि उनीहरूमा खिन्नता पैदा हुनसक्छ।
कतिपय पुरुषलाई सेक्सपछि छटपटी हुन्छ। यस्तो हुनुलाई डाक्टरले पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया भनिन्छ। यो सबै पुरुषमा हुँदैन। तर, केही मानिसमा यस्तो समस्या हुन्छ। यदि यस्तो समस्या देखिए यौन रोग विषेशज्ञको परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ।